JumpDrive inokutendera iwe kuti uise masystem mune yemukati ndangariro | Linux Vakapindwa muropa
Mangwanani ano, sevha yakanyora nemufaro nezvayo Arch Linux ARM muPlasma Mobile yayo yePineTab. Kwete kuti zvese zvakakwana uye zvakanyanya kukurumidza, asi zvakasiyana zvakanyanya kubva pane chero chinhu chandanga ndamboedza. Iyo ine yakanaka dhizaini yeKDE uye mashandiro eArch, icho chisiri chidiki chinhu. Ndine iyo yakaiswa pane SD kadhi, chii chandiri kuzoita kana ndakaomesa musoro uye ndichida kusiya Ubuntu Kubata mune yemukati ndangariro, asi kana ndikafunga kuiisa muMMC ndaitofanira kudhonza Vadivelu Comedy JumpDrive.
JumpDrive zvakasiyana zvingareva chimwe chinhu senge kusvetuka mota kana chimwe chinhu kutsika mota. Ndozvazviri. Icho IMG chifananidzo senge Arch Linux ARM, Mobian kana Ubuntu Kubata, asi haina chero system yekushandisa. Iyo inoshanda chete kune chinhu chimwe chete: kugona kubatanidza chishandiso chedu kukombuta yedu kuitira kuti PC yedu ikwanise kuwana memory yemukati.
Maitiro ekuisa uye kushandisa JumpDrive
Sezvatinoverenga mune yayo peji yepamutemo, izvozvi zvinoshanda pa:
Kuchena Librem 5
Kuisa JumpDrive uyezve system mune yemukati ndangariro yePinePhone yedu kana PineTab, isu tinofanirwa kutevedzera matanho aya:
Takadhinda mufananidzo we Iyi link.
Isu tinoshandisa iyo "dd" nzira kuiisa pane SD. Kurema kwacho kuri pasi pe10MB, saka chero SD inokosha. Kana iwe usingazive chinonzi "dd", ndechekuvhura terminal uye nyora zvinotevera, uchichinja "NAME-OF-THE-IMAGE.img" yeiyo yemufananidzo wakadzingwa uye X yenhamba yako unit, pamwe 0:
sudo dd bs=64k if=NOMBRE-DE-LA-IMAGEN.img of=/dev/mmcblkX status=progress
Isu tinoisa iyo SD kadhi mune mudziyo.
Takazvitanga. Iwe unofanirwa kuona kupenya skrini uye chishandiso chekuchengetera mushure mekubatanidza chishandiso kuPC PC.
Nechigadzirwa chakabatana, unogona ikozvino kupenya distro, kana kugadzirisa gadziriro isingazobhuya.
Pane Librem 5:
Isu tinobvisa iyo faira kubva kuJumpDrive kuvhurwa kwakaburitsirwa Librem 5.
Isu tinoisa chishandiso mu flash mode.
Chekupedzisira, isu script boot-purism-librem5.sh kubva script boot-purism-libremXNUMX.sh .
Pane Xiaomi Pocophone F1 / OnePlus 6 / OnePlus 6T chingotanga mufananidzo uchishandisa fast boot.
Uye ndizvo chete. Saka tinogona kuva chero hurongwa hwakatsigirwa mundangariro dzemukati medu nharembozha inoenderana, asi tichirangarira chinhu chimwe: ese ari muchikamu cheAlpha kana beta, saka zvingafanira kudzoreredzwa munguva inotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » JumpDrive, iyo diki software iyo inobvumidza iwe kuti ubatanidze nhare mbozha kuPc yekuisa anoshanda masisitimu mune yemukati ndangariro
Chrome OS 92 inouya nezvikwidziridzo zvemadhiropu chaiwo, musangano wevhidhiyo nezvimwe